Sheikh Axmed Deedat – Shumicii fidinta diinta Islaamka. | Radio Himilo
Home / MAQAALO / Sheikh Axmed Deedat – Shumicii fidinta diinta Islaamka.
Muqdisho – Shiikh Deedat wuxuu ahaa han-sarreeye iyo caalim Muslim ah oo ku barbaaray dalka Koofur Afrika kaas oo ku caan baxay doodaha furan oo uu la yeeshay culimada diinta Masiixiga. Sanadkii 1986-kii, wuxuu la dooday Jimmy Swaggart, wuxuuna xittaa fagaaraha Vatican Square kula faltamay Pope John Paul II.
Wiilkiisa, Yousuf Deedat wuxuu ugu yeeraa “Xiddiga Masrixiyadda.”
Hayeeshe, halka Shiikh Deedat uu aad ugu caan baxay garashada iyo xusuusta hibada leh oo doodihiisa laga dheehday, wuxuu sidoo kale ahaa qoraa keydiya dhigaalladiisa.
Wuxuu daabacay in ka badan 20 buugaag iyo suugaan iyo qormooyin kala duwan oo malaayiin koobi laga sameeyey dunida oo dhan.
Badi daabacadiisa waxaa lagu tarjumay luqado kale. Sanadkii 1986-kii, dalka Sucuudiga ayaa Deedat ku abaalmariyay biladda King Faisal taas oo lagu siiyay doorkiisa la xiriira adeegga diinta Islaamka.
Howshan halgankeedu dheer yahay waxay Shiikh Axmed Deedat kasoo saartay astaan u taagan dunida Muslimka guud ahaan.
Yuusuf Deedat wuxuu xusuustaa sida madax-weynihii hore ee Kuufur Afrika uu aabihiis ugu yeeray xilli uu safar madaxtinimo ku joogay Sucuudiga sanadkii 1994-kii, isaga oo u sheegaya in meel walba oo uu tago wax laga weydiinayo daaciga Muslimka ah.
“Marka uu dhalinyarada la kulmo waxay weydiin jireen: ‘Mudane Mandela siduu yahay Shiikh Deedat?”
8 August waxay ku taagan tahay maalintii uu ifka ka xoroobay kadib markii uu muddo la xanuunsanaa fashal killida ah. Wuxuu ku dhintay da’da 87-jir. Wuxuu bukaan-jiif ahaa muddo 10 sanadood ah kadib markii cudurka qalalka – stroke uu nugleeyey xubnihiisa. Mana awoodi karin inuu hadlo.
In kasta oo dhaqaatiirtu siiyeen fursad yar oo uu ku samata-bixi karo, Deedat wuxuu kusii jiray faafinta dacwada iyo ka qeyb-galka munaasabadaha dadka aan Muslimiinta ahayn lagu soo musliminayo.
Laaji Hindi oo aabihiis kala yimid Hindiya si ay ugu noolaadaan Koofur Afrika da’da 9-jirka, Deedat wuxuu muujiyay karti iyo dadaal kahor inta faqrigu uusan ku qasbin bannaanka dugsiga kadibna xoogsi.
La’aanta wax-barashada nidaamiga ah ilaa da’da 16-jirka, wuxuu iskiis isku bari jiray aqoonta sida aqriska, dhageysiga doodaha iyo barnaamijyada, marka loo eego mareegta Islamic Propagation Centre International (IPCI), oo ah urur uu Shiikh Deedat la bilaabay saaxiibkiisa rumaad, Goolam Hoosein Vanker.
Maanta, macaahidda sida IPCI waxay kusii jiraan shaqada daaciga. Marka loo eego Jaamacad ku taalla Koofur Afrika, Deedat wuxuu weji cusub u yeelay nidaamka dacwada Islaamiga ah. Wuxuu dhowr jeer ugu yeeray Muslimiinta inay diintooda ku ilaaliyaan qayaxnaan.
Axmed Hussein Deedat wuxuu 1 July sanadkii 1918-kii ku dhashay gobalka Gujurat ee dalka Hindiya. Wuxuuna geeriyooday sanadkii 2005.
Previous: Ku seexashada Marwaxado shidan waxay sababi kartaa dhimasho kedis ah!
Next: Madax-weynaha Atletico: “Simeone magali karo gorgortan.”